5G wuxuu yimid Janaayo ilaa Spain | Androidsis
Muddo dheer ayey baxayeen ogaanshaha faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan teknolojiyadda 5G. Tiknoolajiyaddan cusub, isgaarsiinta ayaa la filayaa inay xitaa dhakhso u socoto. Haa ka boodka 3G ilaa 4G wuxuu ahaa mid cajiib ah, waxaa lafilayaa in kiiskan uu kasii sarreeyo. Marka guud ahaan waxoogaa filashooyin ah ayaa jira. Illaa iyo hadda lama ogayn waxa ku saabsan imaatinkaaga Spain. In kastoo, mahad websaydhka Wasaaradda horay loogu ogaa.
El Wasaaradda Warshadaha, Dalxiiska iyo Agenda Dijital ah ayaa durbaba qaadeysa tilaabooyinka ugu horeeya si 5G ay u gaarto Spain. Waxaa intaa sii dheer, wuxuu sameyn doonaa wax ka dhakhso badan inta badan filayaan. Laga bilaabo Janaayo waxay noqon doontaa xaqiiqo.
Waxay noqon doontaa laga bilaabo Janaayo 2018 marka shaqadu bilaabmayso inta jeer ee ugu horaysa 5G. Waa geedi socod si tartiib tartiib ah u kobcaya. Ku taariikhda bilowga ah ee dhammaystirka waa 2020. Ilaa intaan ogahay, geedi socodka fulinta 5G ee Isbaanishka durba waa run.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa guutooyinka 3,6 GHz iyo 1,5 GHz. Iyaga ayaa loo isticmaali doonaa kordhinta awooda isku xirnaanta magaalooyinka. Marka kororka xawaaraha ayaa la filayaa. Intaas waxaa sii dheer inay caqli yeelan doonaan. Ku qiyaasaha ayaa u dhexeeya 1 iyo 3 Gbps, halka qandaraaska kooxda uu noqon doono 700 MHz.Inkastoo ay imaan doonto waqti kadib.
La Waqtiga kama dambaysta ah ee ay Brussels dhigtay arrintaan waa Juun 30, 2020. Taariikhdaas waxaa la filayaa in 5G waxaa si buuxda looga hirgaliyay Spain. Uguyaraan waa sida ay tahay inay ahaato sida ku cad tilmaamaha Midowga Yurub. Marka waxaan rajeyneynaa in waqtiyada loo qabtay la qabtay.
ka isticmaaleyaashu waxay ogaan doonaan caymis wanaagsan markasta mahadnaqa 5G. Marka lagu daro saamaynta togan ee isgaarsiinta. Maadaama isku xirnaansho fiican ay lagama maarmaan tahay. Gaar ahaan horumarka adeegyada cusub. Markaa waa arrin la sugo. Laga bilaabo Janaayo, 5G wuxuu yimaadaa Spain wax walbana waxaa lafilayaa inay diyaar noqdaan bisha Juun 2020.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 5G wuxuu imaan doonaa Spain laga bilaabo Janaayo